आज ४ कम्पनीमा झुम्मिए लगानीकर्ता, कुनको कति बिक्री भयो सेयर ? - Arthatantra.com
आज ४ कम्पनीमा झुम्मिए लगानीकर्ता, कुनको कति बिक्री भयो सेयर ?
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन सेयर बजारमा झिनो गिरावट आएको छ । उक्त दिन बजार ०.६२ अंकले घटेको छ।
बजार परिसुचक २८७५.९८ अंकको बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । आज ७ अर्ब ५ करोड ७ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ४४ लाख ७४ हजार ८५५ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ ।
उक्त दिन सबैभन्दा बढी कारोबार रिदी हाइड्रोपावरको भएको छ । कम्पनीको आज ४९ करोड ३९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो । कम्पनीको आज ५ लाख ७ हजार ६४४ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको हो । कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९५५ रुपैयाँ रहेको छ ।
कारोबार कै आधारमा दोस्रो स्थानमा रहेको अरुण भ्याली हाइड्रोपावरको ४८ करोड ८५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बराबरको खरिदबिक्री भएको छ । कम्पनीको आज ७ लाख १ हजार ५३५ कित्ता सेयर किनबेच भएको हो । कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७०३ रुपैयाँ रहेको छ ।
यस्तै, रैराङ हाइड्रोपावरको ३३ करोड ६५ लाख ६ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको आज ४ लाख ८५ हजार ७५२ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको हो । सेयर मूल्य भने प्रतिकित्ता ७०९ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
त्यसैगरि उक्त दिन युनाईटेड मोदी हाइड्रोपावरको ३१ करोड २४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । कम्पनीको आज ४ लाख ९८ हजार १११ कित्ता सेयर किनबेच भएको हो । सेयर मुल्य भने प्रतिकित्ता ६२५ रुपैयाँ रहेको छ ।
वि.सं.२०७८ भदौ २४ बिहीवार १५:४३ मा प्रकाशित
अघिल्लाे साताको अन्तिम कारोबार दिन: कुन कम्पनीका लगानीकर्ताले कति कमाए ?
पछिल्लाे लगातार उच्च दरमा बढ्यो सानिमा लाइफको सेयर मूल्य: आज ३५० कित्ता मात्रै बिक्री, प्रतिकित्ता कति ?